ETO dia manomboka amin'ny beta amin'ny làlan'ny bisikileta amin'ny Android | Androidsis
ETO dia manomboka ny sari-tany amin'ny dingana fitsapana lalana amin'ny bisikileta amin'ny Android
Bisikileta, ary ny fampihetseham-batana omeny, nivoatra be tato anatin'ny taona vitsy lasa. Fiara madio tanteraka izay tsy mamoaka CO2 sy ireo bisikileta an-tendrombohitra mavesatra ireo, izay azontsika vidiana anio, dia misy halavirana lavitra ary indrindra ny lanjany.
Noho izany antony izany, ETO Sarintany, safidy tsara ho an'ny google map, te hanampy antsika amin'ny lahasa fantaro ny làlan-bisikileta mahaliana indrindra izay mety misy amin'ny faritra misy antsika miaraka amina endri-javatra vaovao izay niditra beta taorian'ny nampidirina azy tamin'ity serivisy ity tsy ela akory izay. Ny programa beta komunitas Android dia hanampy ny mpamorona hahafantatra izay tena ilain'ny bisikileta.
Google dia efa niresaka ny lalan'ny bisikileta avy amin'ny fampiharana azy, saingy ETO no tadiaviny apetraho amin'ity karazana serivisy ity ny lantom-peo. Ho an'ireo izay te handray anjara amin'ny beta dia azon'izy ireo atao izany amin'ny rohy zaraiko amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Avy amin'ny fampiharana no ahitanao ity safidy ity amin'ny làlan'ny bisikileta izay ahitanao ny Tombana amin'ny ora hahatongavan'ny, zotra mahaliana haleha, ny làlana sy ny fampahalalana hafa rehetra. Mahaliana fa fantatrao fa ireo izay mandray anjara amin'ny beta, dia mbola tsy manantena zavatra betsaka amin'izany, satria amin'izao fotoana izao dia manangona angon-drakitra ireo mpamorona. Satria mbola tsy napetraka ny zotra, izany no antony mamporisihana ireo mpampiasa azy hizaha toetra azy ireo mba handray anjara amin'ny fampiharana.
ETO Sarintany asehoy ny lalan'ny bisikileta miaraka amin'ireo safidy fitaterana hafa misy. Ny tanjona hafa dia ny manampy ireo làlan-bisikileta manokana amin'ny ho avy aorian'ny ekipa tompon'andraikitra amin'ny fanangonana ny angon-drakitra izay zarain'ireo mpampiasa hampiditra azy ireo ao anaty fampiharana. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy dia hampahafantatra ny haavon'ny fandotoana rehefa maniry ny handinika làlana iray haleha ny mpampiasa.
Avy amin'ity rohy ity afaka mandray anjara amin'ny beta ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » ETO dia manomboka ny sari-tany amin'ny dingana fitsapana lalana amin'ny bisikileta amin'ny Android
Mampifangaro an'i Google Drive amin'ny beta ho an'ny Android sy Chrome i Evernote